Itoobiya oo Dib ula noqoneysa Ciidamadii ka joogay Soomaaliya – SBC
Itoobiya oo Dib ula noqoneysa Ciidamadii ka joogay Soomaaliya
Raisal wasaaraha dalka itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa warbaaihinta u sheegay in si deg deg ah ciidamadooda kala baxaan somaliya,isagoo sidoo kale ugu baaqay ciidamada amisom iyo kuwa somaliya in ay si deg deg ah ula wareegaan goobaha ay baneeyan.
Itoboobiya ayaa horey u sheegtay in ay ciidamadeeda kala baxeyso somaliya sanadkii hore,waxaana sidoo kale itoobiya ay la baxday qaybo ka mid ah ciidamadeeda gobolada Bakool iyo baay oo ka mid ah dalka somaliya.
“Marar kala duwan ayaa ay Amisom naga dalbatay in ciidamadeena sii joogaan dalka somaliya,hase ahaate waxaan dareemnay in amisom nagu daahday” ayuu hadalkiisa ku yiri Hailemariam.
Dhinaca kale waxaa uu ku baaqay in Ciidamada somaliya si dhaqso leh kula wareegaan deeganada ay baneen doonaan ciidamada itoobiya ee ku sugan dalka somaliya,waxaana uu sheegay in ciidamadooda geeyn doonaan xuduudaha itoobiya.
Ugu danbeytiina tani waxaa ay daliil u tahay muran la sheegay in uu dhaxeyo dawlada somaliya iyo Dawladaha dariska ah gaar ahaan wadamada Kenya,itoobiya waxaana wali soconaya dhex dhexaadin ay wadaan wadamo ku yaala Geeska afrika.